Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 4:34 PM
If you want to call Dad to Kalar !
Just do not stay in Myanmar, go to Bangladesh. If you want to support fabricated history, please read more , study more ! Our own resources are not even gained for own people, how could, will any other nations around the world, will say like you say ? Will you consider your guests as the owner of your house? They eat in Myanmar, they shit in Myanmar, the grow in Myanmar, even they were not invited, now we do not say that they must go back at least,now they are claiming for ethnic right AND ownership ! will you give your land ? Think first, research first, and talk , and be polite !
Ko Zay said...
အဲလိုပြောတဲ့သူ ကိုယ့်ထက်အရင် အခြေချသူတွေရှိရင်တော့ပြန်ပေးလိုက်ဗျာ။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြေးပေါက်ရှာထားပေတော့။ ငါတော့ရခိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတွေငါတို့ညီအစ်ကိုတိုင်းရင်းသားမြေကို လာလုနေတာလုံးဝလက်မခံဘူးနိုင်ဘူး။
ကုလားတွေမှာ အရိုးစွဲနေတာတွေ အများကြီးရှိတယ် အဲတာတွေထဲက တစ်ခုကတော ကလိမ်ကကျစ်ကျခြင်းဘဲ ကိုရံကျမ်းကလဲ အဲတာတွေ သင်ပေးနေတာဘဲ အလ္လာက အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ မိန်းမတွေ ယူခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ ဖာသယ်မတွေကိုလဲယူခွင့်ပေးထားတာပေါ့ ပြီးတောဖာသယ်မတွေကိုအလာအတွက် witness လုပ်ပြီးမူဆလင် convert လုပ်ခိုင်းကြ တမန်တော်မူဟာမတ်ကလဲ တလင်ကွာ မုဆိုးမကိုယူခဲတာဘဲ မူဆလင်ဆိုတဲ့ meaning က အမိန့်နာခံခြင်းဆိုပြီး အဖတ်ဆယ်ပြောနေတာ တကယ်တော ကျွှန်ပြုခြင်းခံရတာဘဲ အဲဒီတောကုလားတွေကကျွှန်တွေဘဲ ပြီးတော အာရပ်ဆိုတာ dessert dwellers တွေပါ ဒါကြောင့်ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေက အာရပ်သင်္ဘောပျက်ပြီးရောက်လာတယ်ဆိုရင် အာရပ်ကိုပဲ ပြန်သွားကြ မင်းတို့အတွက် မောင်တောဘုတ်ဆိပ်မှာသင်္ဘောပို့ထားပေးမယ်
ဒိဆိုဒ်ကိုကျွန်တော် အခုမှရောက်တာပါ..ဒိဆိုဒ်ကတော်တော်လန်းပါတယ် ..ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်ကိုလဲ လေးစားပါတယ်..မှန်ပါတယ်..အကိုတို့ရပ်တည်ချက်လုံးဝမှန်ပါတယ်..ရခိုင်ပြည်မှာ.. ရိုဟင်ဂျာဆိုတာလုံးဝ မရှီစေရဘူးးကုလားတွေ ကိုမောင်းထုတ်ပါ..ရခိုင်တွေ ဟာစည်းလုံးပါတယ်..တော်တော်များများပါပဲ..ရခိုင်ပြည်ဟာ.မြန်မာပြည်ထဲမှာ ပါဝင်သလိုကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေ ဟာလဲကုလားတွေ ကိုမောင်းထုတ်သင့်ပါတယ်..မြန်မာပြည်မှာမွတ်စလင်တွေ မရှီရင်..ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ.မွက်စလင် မကဘူး တယုတ်တွေ ပါမောင်းထုတ်သင့်ပါတယ်...
ဦးနေ၀င်းကို တစ်ခုတော့ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ တရုတ်တွေ ကုလားတွေကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် မပေးတာ ဦးနေ၀င်းပါ ထိုင်းဆိုရင် မှတ်ပုံတင်ပေးမိလို့ ထိုင်းလူမျိုးဆိုတာ ခုပျောက်လုမတတ်ပဲ